အင်တာနက်ပေါ်မှမိုးလေ ၀ သနှင့်ဇလဗေဒပညာသည်မိုးလေဝသ၊ ရာသီဥတုနှင့်အခြားသောဆက်စပ်သိပ္ပံများဖြစ်သောဘူမိဗေဒသို့မဟုတ်နက္ခတ္တဗေဒဘာသာရပ်များကိုဖြန့်ဝေသောဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သိပ္ပံနည်းကျကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အယူအဆများနှင့်ပတ်သက်သောတိကျခိုင်မာသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြန့်ဝေပေးပြီးသင့်အားအရေးအကြီးဆုံးသတင်းနှင့်အညီသင့်အားနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းပေးပို့ပါမည်။
Meteorología en Red ၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့သည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် မိုးလေ ၀ သနှင့်ဇလဗေဒဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ။ သငျသညျအစအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုလျှင်သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဤပုံစံကိုပို့ပါ.
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံဘွဲ့နှင့်မာလဂတက္ကသိုလ်မှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရေးမဟာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ငါမိုးလေဝသနှင့်ရာသီဥတုလေ့လာမှုပြိုင်ပွဲမှာလေ့လာခဲ့တယ်။ ဤဘလော့ဂ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်နှင့်လေထုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်လိုအပ်သောဗဟုသုတအားလုံးကိုထုတ်လွှင့်ရန်ကြိုးစားသည်။ မိုးလေ ၀ သနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာစာအုပ်မြောက်မြားစွာကိုကျွန်ုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ ရိုးရိုးလေးနှင့်ဖျော်ဖြေမှုများဖြင့်စုဆောင်းရန်ကြိုးစားနေသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဘူမိဗေဒပညာရှင်၊ ဘူမိရူပဗေဒနှင့်မိုးလေ ၀ သနှင့်ဇလဗေဒဆိုင်ရာမဟာဘွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ သိပ္ပံ (သို့) သဘာဝကဲ့သို့သောပွင့်လင်းသောသိပ္ပံဂျာနယ်များကိုပုံမှန်ဖတ်ရှုသူ။ ငါမီးတောင်ငလျင်ဗေဒအတွက်စီမံကိန်းကိုလုပ်။ , Sudetenland အတွက်ပိုလန်နှင့်မြောက်ပင်လယ်အတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်အလေ့အကျင့်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်သမျှဖွဲ့စည်းရေးကျော်လွန်, မီးတောင်များနှင့်မြေငလျင်များငါ့စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ငါ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီးကွန်ပျူတာကိုနာရီပေါင်းများစွာစောင့်ရှောက်နေသည့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်ငါ့ကိုအကြောင်းကြားရန်ဘာမျှမရှိပါ။ သိပ္ပံပညာသည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်အကိုင်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်သည်။
ငါလယ်ပြင်၌ကြီးပြင်း, ငါ့ကိုဝိုင်းရံအရာအားလုံးကနေလေ့လာသင်ယူအတွေ့အကြုံနှင့်သဘာဝနှင့်ဆက်စပ်မှုအကြားပင်သရုပ်ဖော်လက္ခဏာဖန်တီး။ နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်သဘာဝအတွင်းသို့သယ်ဆောင်လာသည့်ထိုဆက်သွယ်မှုကိုမနှစ်သက်ပါ။
A. အ Esteban
ငါ့နာမည်ကအန်တိုနီယိုဖြစ်တယ်။ ငါကဘူမိဗေဒဘွဲ့၊ မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နဲ့ဘူမိရူပဗေဒနှင့်မိုးလေဝသဗေဒဘွဲ့။ ငါလယ်ပြင်ဘူမိဗေဒပညာရှင်အဖြစ်နှင့်ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာစာရေးဆရာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်လည်းလေထုနှင့်မြေအောက် CO2 အတွက်အပြုအမူလေ့လာရန် micrometeorological စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မိုးလေ ၀ သနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစည်းကမ်းများကိုလူတိုင်းအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်၏သဲလုံးများကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။